Koox ciyaarta kubada barafka oo loo dhisayo Somalia | Somaliska
Sweden's Daniel Andersson and Russia's Alan Dzhusoev (R) vie during Bandy World Championship final match Sweden vs Russia in Vanersborg, Sweden, February 3, 2013. AFP PHOTO / SCANPIX / ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT
Magaalada Borlänge ayaa waxaa looga dhawaaqay koox ciyaari doonta kubada Bandy oo ku ciyaari doonta magaca wadanka Somalia. Kooxdaan oo uu hogaamiye u noqon doono ninka lagu magacaabo Per Fosshaug oo horay u ahaan jiray tababare caan ah ayaa ka qeyb gali doonta koobka aduunka ee sanadka 2014 lagu qaban doono ruushka.
Ciyaarta Bandy ayaa ah mid lagu ciyaaro barafka oo kubada lagu hagayo ul. Soomaalida oo aan ahayn dad barafka u bartay isla markaana ay ku cusubtahay isticmaalka kabaha barafka ayaa tababaraha cusub waxa uu sheegay in ay noqon doonto mid qosol badan isla markaana xiiso leh.
Kooxda Somalia ayaa sanadka soo socda ka qeyb gali doonto ciyaaraha lagu qaban doono magaalada Irkutsk ee gobolka Siberia ee Ruushka. Kooxda cusub ayaa ka ciyaari doonta guruubka C oo loogu talagalay wadamada soo koraya.
Gudiga olombikada Somalia ayaa soo dhaweeyay aasaaska kooxdaan iyagoo taageeray fikrada. Tababaraha kooxda Per Fosshaug ayaa sheegay in mashruucaan uu yahay mid isdhexgal. Isaga laftiisa ayaa ku dhashay magaalada Borlänge. Sanadihii u dambeeyay ayaa magaaladaasi waxaa deegaan ka dhigtay Soomaali tiradooda gaareyso 3000kun
Shirka sanadlaha ee barayaasha afafka hooyo
Goobjooge : arintaan waa arineey aad ula yaabeen , shacabka sweden , sababtoo ah BARAF iyo SOOMAALI ..
Haddana sidaasoo tahay , waxaa noqoneynaa wadankii ugu horeeyay ee AFRIKAANA oo cayaar nuucaana tartan heer caalami ah uga qeyb gala….
Kaliya bandy maahan , waxey sameynayaan , waxaa jiroo kale OROD , BOOTIN Dabaal , laakin waa in la helaa dad raba ineey tabo bartaan oo ka qeyb galaan una diyaara
Hussein A says:
Ummada ka daa quraafaadka iyo marinhabaabinta ee dhanka dinta u jeedi afkaarta iyo waxi dadka anfaci karo sida iney ka fogaadan waxyabaha malaa yacniga ah iyo waxa sababi karo iney magacooda iyo dhaqankooda iyo diintoda mustaqbalka saameynkara fadlan!!
Baraf qabiye says:
Saan rabney ahaa Waan socon weynee aan oradno
waxaasaa i maraayo aniga waxaaba igu filan in magaca SOMALIA iyo CALANAKA BULUUGA ah ay ka soo muuqdaan shaashadah caalamka oo bulshaduna nagu bartaan magac cususb oo ah NEW SOMALIA oo ah horumar wada noolaasho iyo cadaalad, love you all my somali brothers and sisters god bless you
May 15, 2013 at 14:17
ascw waxay ila tahay in la rabo in somalia sumcadeeda lagu cayaaro iyadoo la adeegsanayo qolyo aan ka fakarayn waxay samaynayaan. waxaa ila haboon waxayaabhaas oo kale in dadka cayrta ku wareeray aysan sumcad xumo usoo jeedin wadankii.